को थिए लता मंगेशकरका प्रेमी
न्यूजलय शुक्रबार १३, असोज २०७४
काठमाडौं । लता मंगेशकरलाई नचिन्ने कमै होलान् । उनले हजारौं गीतहरु गाएर श्रोताको मन जित्न सफल भएकी छन् । उनले जिन्दगीभर विवाह गरिनन् । तर, उनलाई विवाह गर्न मन नलागेको भने होइन् ।
लता मंगेशकरले एक राजालाई प्रम गर्थिन । भारतीय सामाचारमा उल्लेख भए....
​मलेसियामा परदेशी धमाका हुने
न्यूजलय बिहीबार १२, असोज २०७४
इटहरी । मलेसियाको क्वालालम्पुरमा परदेशी धमाका ४ हुने भएको छ । आगामी अक्टोवर १८ अर्थात असोज १८ गते मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा परदेशी धमाका ४ हुने भएको हो ।
धमकामा नेपाल आइडलकी चर्चित प्रतिस्पर्धी प्रमिला राईको मुख्य आकर्षण रहने बताइएको छ । त्यस्तै हाँस्य कलाकारद्वय....
सलमानले दिए बरुणलाई पुरानो जिन्स उपहार
काठमाडौँ । वरुण धवनको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘जुडवा २’ को प्रमोसन सलमान खानले गरिरहेका छन् । यो फिल्ममा सलमानको केमियो रोल छ ।
आउँदो शुक्रबार रिलिज हुने यो फिल्म २० वर्षअघि बनेको ‘जुडवा’ को रिमेक हो । पुरानो हिट फिल्म ‘जुडवा’ मा सलमान खानको....
‘छक्का पञ्जा २’ को पहिलो सो मै हाउसफुलको ब्यापार
इटहरी । फुलपातीको दिन अर्थात असोज ११ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ ले बम्पर ओपनिङ गरेको छ ।
अल नेपालका एक सय भन्दा बढी हलहरुबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ ले बुधबारको पहिलो सो हाउसफुलको ब्यापार गरेको हो । दिपाश्री निरौला....
​‘पहिलो एल्बम ५ लाख बिक्यो, चौथो १५ हजार’
सञ्जीव सिंह नेपाली संगीत प्रेमी युवाहरुले निकै रुचाएका गायक हुन् । एक दशक अघि सञ्जीव सिंहले गाएका गीतहरु नै युवाहरुको ओठमा झुण्डिरहेको हुन्थ्यो । उनका अल्वेज, अनप्लग्ड, सेलेक्टेड संजीव, बेस्ट अफ सञ्जीव, तिमी र म, मुग्लान, मैच्याङ च्याङ्बा ।
तर युवा रोजाईका यी गायक....
‘छक्कापञ्जा २’ले बुकिङ खोल्यो
इटहरी । यस बर्षको बहुप्रतिक्षित फिल्म ’छक्कापञ्जा २’ को बुकिङ खुल्ला भएको छ । दिपाश्री निरौला निर्देशित फिल्म ’छक्कापञ्जा २’ असोज ११ गते, फूलपातीबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको हो । गीत तथा टे«लरको चर्चा संगै फिल्म प्रतिक्षामा रहेको छ ।
’छक्कापञ्जा २’ को बुकिङ खुल्ला....
​फिल्महरूलाई कुन आधारमा ग्रेड दिइन्छ ?
काठमाडौं । फिल्महरूलाई ए, बी र सी गरी तीन ग्रेडमा बिभाजन गरिन्छ । ए ग्रेडका फिल्महरू सामान्य पारिवारिक हुन्छन् भने बी र सी ग्रेडका फिल्महरू अश्लील हुन्छन् ।
खासमा फिल्मको बजेट र प्रविधि प्रयोगबाट अनि कलाकारहरूको उपस्थितिबाट ग्रेड निर्धारण गरिने हो । ठूलो फिल्ममा....
​विरेन्द्र दंगालको साइलो सार्वजनिक ( भिडियो सहित)
इटहरी । संगीत सहयात्री विरेन्द्र दंगाल, एम आचायको शब्द,संगीत तथा साजन राई को स्वरमा रहेको साइलो गितको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । डो.रे.मी. रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको गितको बजार व्यवस्थापन भने आत्मा विश्वास फिल्मस् प्रा.लि. ले बजार व्यवस्थापन गरेको छ । गत असोज ४ गते....
​कोमल ओलीले गरीन् राप्रपा छाडेर एमाले प्रवेशको तयारी
काठमाडौँ । गायिका कोमल ओलीले राप्रपा छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेकी छन् । राप्रपाको फुटपछि केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी ओलीले पार्टी परीत्याग गरी सोमबार अध्यक्ष केपी ओलीका हातबाट टीका लगाएर एमालेमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् । केही समय अघि गायिका कोमल ओली र नायिका....
​रिलिज भए लगत्तै लिक भयो न्यूटन
इटहरी । भारतको तर्फबाट उत्कृष्ठ विदेशी फिल्म क्याटेगोरीमा पर्न सफल फिल्म न्यूटन लिक भएको छ । राजकुमार रावको उक्त फिल्म शुक्रबार मात्रै रिलिज भएको थियो । आलोचक र दर्शकले फिल्मको निकै तारिफ गरेका थिए ।
तर रिलिजको २४ घण्टापछि नै फिल्म पाइरेसीको शिकार भयो....